Kalsoonida horteed Carshiga hortiisa, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Cibraaniyada 4,16 wuxuu leeyahay, "Haddaba aan carshiga nimcada si kalsooni leh ugu tagno si aynu naxariis u qaadanno oo aan u helno nimco markaan caawimaad u baahanno." Waxaan maqlay khudbad ku saabsan aayaddan sanado badan kahor. Wacdiyuhu muu ahayn wakiil wakiil ka ah injiilka barwaaqada, laakiin wuxuu si gaar ah u adkeeyay inaynu Ilaah weydiisanno kalsooni isla markaana madaxeenna kor u qaadno waxa aannu doonaynno. Hadday u wanaagsan yihiin annaga iyo dadka nagu xeeran, markaa Ilaah ayaa arki doona inay taasi dhacaan.
Hagaag, taasi waa sax waxa aan sameeyay oo waad ogtahay waxa? Ilaah iima uusan siin waxaan ka codsaday inaan sameeyo. Bal ka fikir niyad jabkayga! Waxyar bay iimaan-xumaysay sababtoo ah waxay dareemaysay inaan Ilaahay siinayo kalsooni weyn anigoo weydiisanaya wax madaxayga sare leh. Isla mar ahaantaana, waxaan dareemay aaminaada aan u qabo waxa oo dhan waxay iga horjoogsatay inaan helo waxa aan codsaday Eebbe inuu sameeyo. Nidaamkayaasheena aaminaadu ma waxay bilaabeysaa inay burburto marka Eebbe uusan na siinin waxaan rabno, in kastoo aan ognahay hubaal inay ugu fiicnaan laheyd annaga iyo dadka kale? Dhab ahaantii ma ognahay waxa inoogu habboon annaga iyo dadka kaleba? Waxaa laga yaabaa inaan u maleyno sidaas, laakiin dhab ahaantii garan mayno. Ilaah wax kasta wuu arkaa, wax walbana wuu og. Kaliya isagu waa ogyahay waxa ugu wanaagsan midkeen kasta! Runtii aaminaaddeennu ma Ilaah baa ka celinaya inuu ficil sameeyo? Waa maxay macnaha inay si kalsooni leh ugu istaagaan carshiga nimcada Ilaah?
Qoraalkani ma aha mid istaagaya Ilaah hortiisa nooca awoodda aanu u naqaanno - amar leh geesi, go'aan, iyo geesinimo. Saas ma aha, aayaddu waxay sawir ka bixineysaa xiriirka u dhexeeyayaga wadaaddada sare, Ciise Masiix, inuu u ekaado. Waxaan toos ula hadli karnaa Masiixa oo uma baahnin qof kale oo dhexdhexaadiye ah - ma jiro wadaad, wadaad, guru, clairvoyant ama malaa'ig. Xiriirkan tooska ahi waa mid aad qaas u ah. Suuragal uma aha dadka kahor dhimashada Masiixa. Intii lagu jiray muddadii axdiga hore, wadaadka sare wuxuu ahaa dhexdhexaadiye u dhexeeya Ilaah iyo nin. Kaliya wuxuu marin u helay meesha ugu wanaagsan (Cibraaniyada 9,7). Meeshan aan caadiga ahayn ee taambuuggu waxay ahayd mid gaar ah. Waxaa la rumeysan yahay in tani ay ahayd jiritaanka Ilaah dhulka. Dhar ama daah ayaa ka soocay macbudkii intiisa kale, oo dadka loo oggolaaday inay joogaan.
Markuu Masiixu u dhintay dembiyadeenna aawadood ayuu daahkii labalaabmay (Matayos 27,50). Ilaah kuma sii noolaado macbudka uu binu-aadmiga abuuray (Falimaha Rasuullada 17,24). Macbudku hadda maahan jid loo maro Ilaaha Aabbaha ah, laakiin waa inuu ahaado geesinimo. Waan u sheegi karnaa Ciise sida aan dareemeyno. Maahan wax ku saabsan codsiyada geesinimada leh iyo codsiyada aan jeclaan lahayn in aan la kulanno. Waxay ku saabsan tahay inaad ahaato qof daacad ah oo aan cabsi lahayn. Waxay ku saabsan tahay inaan ku shubno qalbiyadeena kuwa na fahamsan oo aan ku kalsoonahay inay sida ugu wanaagsan wax u qaban doonaan. Waxaan ku hor nimid kalsooni madaxdeenna ayaa kor loo qaaday si aan u helno nimco iyo naxariis si ay noogu caawiyaan waqtiyada adag. (Cibraaniyada 4,16) Bal ka fikir in aanan mar dambe ka walwalin inaan ku ducaysanno ereyada qaldan, waqtiga qaldan, ama anagoo la adeegsanna qaab qaldan. Waxaan leennahay wadaad sare oo qalbiyadeena eega. Eebbe nama ciqaabo. Wuxuu doonayaa inuu fahmo inta uu na jecel yahay! Maaha diinteena ama maqnaanshaheena, laakiin aaminka Eebbe ee macnaha u leh tukashadeena.
Maalintii oo dhan Ilaah la hadal. U sheeg si daacad ah sida aad tahay. Hadaad faraxsan tahay, dheh: «Ilaah aad ayaan ugu faraxsanahay. Waad ku mahadsan tahay waxyaabaha wanaagsan ee nolosheyda. ». Haddaad murugaysantahay, dheh: "Ilaahow, murugo weyn baan qabaa. Fadlan ii raaxee. ». Haddii aadan hubin oo aadan aqoon waxa aad sameyso, dheh: «Ilaahow, ma aqaan waxaan sameeyo. Fadlan iga caawi inaan arko doonistaada waxkasta oo hortayda ah. ». Haddaad xanaaqdo, waxaad dhahdaa, Sayidow, aad baan u xanaaqsanahay. Fadlan iga caawi inaadan dhihin wax aan ka xumahay goor dambe. Weydiiso Ilaah inuu ku caawiyo oo aad isaga aaminto. U soo ducee in doonista Ilaah la yeelo oo aan la marin. Yacquub 4,3 wuxuu leeyahay "Waxba ma weydiisanaysid ama waxna ma helaysid maxaa yeelay waxaad weyddiisanaysaa ulajeeddo shar ah, taas oo ah inaad ku khasaarin karto waxyaalaha aad damacdo." Haddii aad rabto inaad hesho waxyaabo wanaagsan, waa inaad weydiisataa waxyaabaha wanaagsan. Ku celi aayadaha Kitaabka Quduuska ah ama gabayada maalintii oo dhan.